ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူကားဖြင့်ခရီးသွားလာ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 26 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်သူတို့တစ်လျှောက်သွားချင်တဲ့သိ – ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုမယူ?
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျန်းမာသေချာအောင်လုပ်ပါ, သင့်ရဲ့ vet နှင့်အတူလာရောက်လည်ပတ်အချိန်စာရင်း, ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမည်သည့်ရိုက်ချက်များသက်တမ်းတိုးဖို့. တချို့ဟိုတယ်များသည်ယခုအခါသင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့စံချိန်လက်ရှိကြောင်းသက်သေသာဓကများပြသသောလိုအပ်.
သူတို့ကိုခွေးလှေးတစ်ဦးကိုကုသပေးနှင့်အချို့နေရာများအဖြစ်ဆေးဝါးကို tick သေချာပါစေခွေးလှေးနှင့် tick နှင့်အတူ infested စေမည်အကြောင်း. heartworm ဆေးပညာ၏တစ်ဦးကိုကုသခြင်ရဲ့သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကူးစက်နိုင်တယ်ကတည်းကအကြံပြုသည်.
၎င်းတို့၏ရိက္ခာများ Check: (သင်ကရနိုင်သည့်တဦးတည်းအသေးလေးအိတ်၌သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အချက်တွေအားလုံးထုပ်ပိုး)
တစ် leash နှင့်ကော်လာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အမည်ကို၎င်း tag ဖြင့် (တစ်စုံတစ်ဦးကဖြေကြားပေးတော်မူမည်အဘယ်မှာရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင့်ပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိပါတယ်, တစ်ဦး cell phone နံပါတ်ကြီးလှပေ၏).
ယူဂိုဆလားဗီးယားရေ, တစ်ရေပန်းကန် (ဖိတ်မထားဘူးလေပိုကောင်းလေမျိုး)
သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာတစ်ထောက်ပံ့ရေး, တစ်ပန်းကန်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်း, နှင့်ရယူထားသောမမေ့မလြော့ပါ
တစ်ဦးကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် brush, သင်တစ်ပတ်လျှင်သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားစေမယ့်နေကြတယ်ဆိုရင်ခေါင်းလျှော်ရည် PET
ကားအနာရောဂါနှင့်ဆက်ဆံသောအခါနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ၌ဖြစ် 95% ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်မရွေ့လျားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအိမ်ပြန်မှပယ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့်အတူကားတစ်စီးခရီးစဉ်သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်ကို vet ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုး, ထို Kennel. ဒါကြောင့်, တစ်ဦးကားထဲတွင်နောက်ဆက်တွဲစီးအလွန်သန်မာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နောက်ဆက်တွဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ evoke သင့်ကြောင်း၎င်း၏အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
တစ်ဦးကားထဲတွင်ခရီးသွားလာဆီသို့ဦးတည် Re-program ကသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့သဘောထား. အကြောင်းပန်းခြံကိုရှာပါ 5-10 အိမ်ကနေမိနစ်, အကောင်းဆုံးကတော့လွန်းကားထဲတွင်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်, ခွေးသက်သာရုံသက်သာနဲ့စီးကနေသူ့ကိုအာရုံလ​​ွဲရန်. လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းပန်းခြံမှမင်္ဂလာရှိသောသူ့ကို Keep. ပန်းခြံမှာခွေးကိုချစ်တော်မူ၏သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုပျော်စရာပြုကြသောအခါ, ဘောလုံးဆွဲယူ, နှင့် Frisbee ကိုလိုက်. ပန်းခြံမှာနေထိုင်ကြောင်းရှည်မည်မှမလိုအပ်ပါဘူး…. တတ်နိုင်သမျှကိုယ့်အဖြစ်ပျော်စရာ. ထိုအခါနောက်တဖန်သူ့ကိုမအပေါင်းတို့သည်လမ်း soothi​​ng ခွေးအိမ်ကားမောင်းသင်ပန်းခြံမှာပြုသကဲ့သို့အိမ်ခွေး့သလောက်ပျော့သွားတာကိုပြုကြသောအခါ. အချိန်နှင့်အခြေအနေပါမစ်ခွင့်ပြုလျှင်မိမိအစာတစ်ခုသို့မဟုတ်အားရစရာနှင့်ဤအပိုင်းကိုပြီးစီးခြင်း.
အချည်းနှီးအပေါ်ခရီးသွားလာ. ခြောက်လမှရှစ်နာရီကြာလမ်းခရီးစဉ်ကိုစတင်မှာအရင်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းငှါမကောင်းတစ်စိတ်ကူးဒါဟာင်. တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်ရှိခြင်းတက်ပစ်လိုက်မှသူ့ကိုနည်းပါးဖြစ်စေမည်, နှင့်သူသည်အနာရောဂါစွဲရပါဘူးဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမစားအော့အန်ရှိင်, ဒါကြောင့်အနည်းဆုံး clean up လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူင်. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရေကိုပေးလှူ, သို့သော်, မိမိဝမ်းကိုကမောက်ကမဖြစ်စေမည်မဟုတ်, သူ့ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်းငှါ.
ဒါမှမဟုတ်လေးပုံတစ်ပုံ-tank ၌ထား. တချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်အကောင်းဆုံးခရီးသွားလာနေစဉ်, အခြားသူများကိုသေးငယ်တဲ့မုန့်ညက်စားပြီးနောက်ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခံစားရ. တချို့ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရုံဖျားနာလာပြီမှသူတို့ကိုစောင့်မကူညီသူတို့ရဲ့အစာအိမ်အတွက်စားစရာအနည်းငယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်.
မကြာခဏငြိမ်ဝပ်အားလပ်ချိန်ယူပါ. တချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပြဿနာတွေမလိုဘဲနာရီသွားလာနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အခြားသူများကိုတစ်မိုင်အနည်းငယ်အကြာတွင် queasy လာပြီစတင်. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျောသူ၏ပြည်ကို-ခြေထောက် get ကူညီသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ပုံစံကိုသိနှင့်ပြီး quick လမ်းလျှောက်အနည်းဆုံးတစ်နာရီကြာတိုင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုရပ်တန့်ရန် Get. ဒါဟာသူ့ကိုအနည်းငယ်ရေကိုလောင်းဖို့လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်, သူကားထဲတွင်င်တော်မူသောအခါသောက်သုံးရေတူမခံစားရနိုင်ပါသည်ကတည်းက.
သူနှင့်အတူကို up-ရှေ့ Be. နောက်ကျောမှာကဲ့သို့ကားတစ်စီး၏ရှေ့၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးလှုပ်ရှားမှုမျှမင့်, သူ့ကိုသင်ရှေ့ထိုင်ခုံတွင်စီးပါစေဒါကြောင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့တစ် doggy seatbelt သို့မဟုတ်ထိကပေါက်ပလ်လငျသို့ငယ်လေးတစ် kennel ၌ရှိကြ၏သေချာအောင်.
မိမိအ Horizo​​n Expand. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, လူတူ, သူတို့ဖြတ်သန်းရှုခင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခါ carsick ရနည်းပါးသွား.
ပြတင်းပေါက်ဆင်း Crank. လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေအနည်းငယ် carsick ခံစားနေရတယ်င်သူမည်သူမဆိုကောင်းမွန်သည်, သင့်ရဲ့ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်အပါအဝင်, သူလမ်းထွက်သူ၏ဦးခေါင်းကိုလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်ရယူနိုင်အောင်ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့ပြတင်းပေါက်မဖွင့်ကြပါ.
အဆိုကိုဆေးကိုစမ်းကြည့်ပါ. Dimenhydrinate (တချို့က Dramamine) — အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးလူတွေကားအနာရောဂါများကိုကာကွယ်ယူ — စအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အအလုပ်လုပ်တယ်. ကြီးမားတဲ့ခွေးအလတ်စားပေးသင့် 25 သို့ 50 အနည်းဆုံးတစ်နာရီခရီးသွားလာမီ Dramamine ၏မီလီဂရမ်, ကြောင်နှင့်အသေးစားခွေးလောက်ရသင့် 12.5 မီလီဂရမ်. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဆိုဆေးဖက်ဝင်ထုတ်ကုန်ပေးခြင်းမပြုမီသင်၏ vet နှင့်အတူစစ်ဆေးတာသေချာပါစေ.
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လုံခြုံစိတ်ချစွာစီးနင်းနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်နေဆဲပြတင်းပေါက်မှမြင်ရ, သင်တို့အနားမှာထိမိစေခြင်းငှါတတ်နိုင်ဖြစ်. သင်ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသင့်ရဲ့ခါးပိုက်၌ထိုင်နေသောကိုအကောင်းဆုံးအိုင်ဒီယာမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကအပြင်၎င်းတို့၏ရေရရှိနိုင်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
အထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့စက်ကိရိယာမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်, သင်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ရန်ရှိပါကသင်သည်ထိုသူတို့အ windshield မှတဆင့်ပျံသန်းချင်ကြဘူး.
သင့်ရဲ့ကြောင်သင်တို့နှင့်အတူအခရီးသွားလာပါက kitty အမှိုက်သရိုက်များအဘို့အရာအရပ်ဖြစ်စေ. ရှေ့ထိုင်ခုံတချို့ကားတွေအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ. ပထမဦးစွာပလပ်စတစ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအိပ် (အမှိုက်အိတ်ပြုလိမ့်မည်).
သင်ပြုလုပ်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်2သို့3Fido သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဆန့်ကြကုန်အံ့နာရီ.
ခေတ်သစ်ကားတွေလုနီးပါးလေထုတင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကားထဲတွင်တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်နေတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လုံလောက်တဲ့လေယာဉ်ဆိုတော့မစွန့်စားမှာဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အပူခံစားနေရပြီး. လေထုအပူချိန်ကိုသာသော်လည်း 70 နေပူထဲမှာကားတစ်စီးအရမ်းပူရနိုင်ဘွဲ့.
မျှော်လင့်ကိုသင်အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များခရီးသွားလာရေးက်ဘ်ဆိုက် check လုပ်ထားနှင့်အွန်လိုင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရင်းနှီးဖော်ရွေဟိုတယ်သို့မဟုတ်မိုတယ်ဘွတ်ကင်. ဟိုတယ် / မိုတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခကြေးငွေကပေးဆောင်အားသွင်းမယ်ဆိုရင်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုန်းဖို့မကြိုးစားပါဘူး, သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေညဉ့်လုံးဖြုန်းပါလိမ့်မယ်.
သင်ရောက်လာတဲ့အခါသင် Fido အတူလမ်းလျှောက်နိုင်သည့်ဧရိယာအနီးကမြေညီထပ်အခန်းကိုမေးမြန်း. အဆိုပါစင်တာဝင်းညာဘက်အရပ်မဟုတ်. ဟိုတယ် / မိုတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေမှုရှိနေပေလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြီးနောက်ကောက်တာသေချာပါစေ.
အများစုမှာနေရာထိုင်ခင်းကိုသင်သိသာအကြောင်းရင်းများကြောင့်အခန်းတွင်တစ်ဦးတည်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချန်မကိုမေး. သင်တို့သည်ထွက်ယူအမိန့်ရှိသည်သို့မဟုတ်အခန်းဝန်ဆောင်မှုနိုင်ပါသည်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်နာရီဝက်ဒါမှမဟုတ်အဘို့အကားထဲတွင်ကျန်ရစ်စေခြင်းငှါအဘို့လုံလောက်တဲ့အအေးခံသည်မှန်လျှင်သို့မဟုတ်သင်ညစာစားရန်ထွက်သွားတစ်လျှောက်နှင့်သူတို့ကိုကြာနိုင်တယ်. သင်သည်အပင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရင်းနှီးဖော်ရွေစားသောက်ဆိုင်မှာတွေ့စေခြင်းငှါ, လမ်းဘေးစင်္ကြံကဖေးတူပြင်ပတွင်ထိုင်ခုံဒေသများနှင့်အတူနေရာကြည့်ရှု.
သင် DESTINATION သို့ရောက်ရှိပြီးဖူး
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့သည်မိမိတို့အိမ်ရာသစ်တစ်ဝှမ်းပြရန်, သင်သည်သူတို့အစာကိုနေရာချနေရာ, ရေ, နှင့်အိပ်ရာ.
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထိုသူတို့ကို kitty အမှိုက်သရိုက်များ box ရဲ့တည်နေရာကိုပြသ. Fido သူအဖြစ်ကောင်းစွာသွားယူဆဘယ်မှာသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
12 အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ smart Move
ခွေးများ Love ဖြစ်ရမည်